Aya ndiwo mashandiro matsva eWhatsApp Stickers | IPhone nhau
Iyo yanga iri imwe yenyaya dzinotarisirwa mumwedzi yapfuura, asi yakazosvika. WhatsApp ikozvino inogona kutumira uye kugamuchira maStickersAya ma "sticker" akanaka ari kuramba achizivikanwa pakati pevashandisi vezvishandiso izvi, uye izvo zvakashambadzwa kwemavhiki.
Iyi ficha nyowani inouya nekumwe shanduko, nekuti iyo nzira yekutarisa nekutumira maGIF paWhatsApp inobatwawo, uye ikozvino kubva pachikamu chimwe chete isu tinokwanisa kutumira ese marudzi emafaira emifananidzo. Tinokupa iwe zvese nezve mashandiro ema Stickers nemaGIF muWhatsApp.
Chinhu chekutanga icho vazhinji vako chauchazobvunza ndechekuti iwe unofanirwa kuita kuti bhatani idzva iri rionekwe. Iwe haufanire kunyange kumirira kuti iyo application iwedzere, zvinongowoneka. Kana iwe usati uchinayo muWhatsApp yako hapana chaungaite, chingomirira. Sezvakaitika pazviitiko zvakapfuura, iko kushanda kunotanga zvishoma nezvishoma asi pasina kumbomira, uye vazhinji uye vazhinji vedu tine basa iri rakagoneswa, uye zvinotarisirwa kuti mumazuva mashoma anotevera munhu wese achakwanisa kuishandisa.
Kubata kwacho kuri nyore uye kwakafanana nemabatirwo azvinoitwa mune mamwe mashandiro akadai seTeregiramu. Kune kurudyi kwedhirowa paunonyora iwo mavara, icon nyowani inowoneka, chinamirwa, icho kana chakadzvanywa chinokupa mukana wekuwana maStickers nemaGIF. Kekutanga iwe paunoshandisa maStickers, hapana yakaiswa package ichaonekwa, asi iwe unogona kuzviita kubva kuchishandiso pachako nekudzvanya pane «+» chiratidzo kukona yepamusoro yekurudyi, sezvaungaona muvhidhiyo.
Parizvino isu chete tinongowanikwa maStickers ayo WhatsApp akaisirwa nekutadza, asi izvozvi yakasimbisa kuti vechitatu-bato kunyorera vanozokwanisa kuisa maStickers, saka munguva pfupi App Store ichazara nemashandisirwo erudzi urwu. Emoji, GIF uye Stickers, kutaurirana neshamwari uye mhuri hakuna kumbove kunonakidza kushandisa nhare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Aya ndiwo mashandiro matsva eWhatsApp Stickers